UToti Martínez de Lezea: «Okuhlangenwe nakho nendlela yokubona impilo ayinakudluliselwa» | Izincwadi Zamanje
UToti Martínez de Lezea: «Okuhlangenwe nakho nendlela yokubona impilo ayidluliseki»
Izithombe: Iphrofayela ye-Facebook kaToti Martínez de Lezea.
UToti Martínez de Lezea has a eside futhi kakhulu waqaphela trajectory efana umbhali wenoveli yomlando. Kuneziqu eziningi ezifana Imibhoshongo kaSancho, Isazi samakhambi, Futhi konke kuthule, I-heath, Enda, Itahisa, Iketanga eliphukile noma Izwe lobisi noju. Futhi silindele entsha ngo-Okthoba.
Kule ngxoxo isitshela okuncane ngaye izincwadi, abalobi y abalingiswa izintandokazi, ngaphezu kokulindela lokho ukukhishwa okusha futhi usitshele ukuthi ubona kanjani i-panorama yokuhlela okwamanje Ngibazisa kakhulu umusa wakho omkhulu nesikhathi osinikezile.
INGXOXO NO-TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA
I-TOTI MARTEZNEZ DE LEZEA: Kuningi njengokukhumbula incwadi yokuqala engiyifundile… sekuyisikhashana! Ngiyakutshela ukuthi ithelevishini yangena endlini yami lapho ngineminyaka eyi-13 ubudala nokuthi bobabili abazali bami babengabafundi abaphambili futhi ngakhulela phakathi kwezincwadi. Ngiyazi futhi ukuthi ukufundwa kwami ​​kokuqala bekuyi- Izinganekwane ze-Andersen, labo abazalwane Grimm, the Izinganekwane zeBasque eqoqwe ngu-don UJosé Miguel de Barandiarán ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX.
Ngokuqondene nendaba yokuqala engiyibhalile… ngangikwazi ukubhala kahle esikoleni esiphakeme! bekade ngi umbhali wombhalo wethelevishini, Ngahlanganisa amaqembu amabili we indawo yaseshashalazini futhi futhi kubhaliwe Mina i imibhalo, kodwa ake sithi okokuqala ekubhalweni kwami ​​kwakungu Abbess, yize okokuqala kwashicilelwa kwaba Umgwaqo wekota yamaJuda e 1998.
I-TML: Impendulo icishe ifane, angikhumbuli, yize ngikhumbula kusebenza njenge Ukubalwa kweMonte Cristo, kaDuma, Izilimi ezingama-25.000 XNUMX zokuhamba ngaphansi kwamanzi, nguJules Verne, noma Isiqhingi samagugunguStevenson, engiyifunde ngisemncane kakhulu. Lokho kufundwa kungiholele ekufuneni okuningi futhi njengamanje umtapo wethu wezincwadi umndeni uqukethe mayelana Izincwadi ze-15.000.
Kungani bangithuse? Ngoba bangiqala emlandweni nasekuhambeni, emasikweni angaziwa, izindlela zokuphila, ezokufika, amasiko… Futhi ngiyaqhubeka!
I-TML: Anginayo akekho y ngine abaningi. Isikhathi ngasinye sami sibe nababhali baso, kuya ngokuthi yini engangiyithandayo mzuzu ngamunye. Ukube bekufanele ngikhulume ezimbalwa, angazi ... UVictor Hugo, uDumas, uTolstoï, uDostoevsky, uZola… Sengineminyaka eyikhulu nesishiyagalolunye!
I-TML: Heh, heh, umbuzo onjani lona! Hlangana mhlawumbe UJean valjean, umlingiswa ophambili we Abadabukisayo, uya U-Edmond Dantès de Isibalo sikaMonte Cristo. Ngokuqondene nokwakha kunoma yimuphi umlingiswa osuvele udaliwe, kahle nakulutho Umbhali ngamunye unezwe lakhe, futhi abalingiswa bayo abaphambili yimisebenzi yomcabango; okuhlangenwe nakho nendlela yokubona impilo ayidluliseki.
I-TML: Ngangivame ukukhanyisa ugwayi, ngokuvamile owawushiswa esitsheni somlotha. Manje sengikuyekile ukubhema, kodwa engikwenzayo ngukuthi dlala umculo. Kokubili uma ngibhala nalapho ngifunda ngiyacinga umsindo ukungiphelezela, ukungisiza ngandlela thile phinda lokho engikufundayo noma engikubhalayo.
I-TML: Nginekamelo engisebenza kulo. Funda ngikwenza noma kuphiNgisho nasekhishini ngisalinde ukupheka kwe-macaroni! Ngokuvamile Ngibhala ngiqeda ukudla kuze kufike isikhathi sedina. Kwesinye isikhathi ngiqhubeka ngize kube sekuseni, phakathi kwamahora ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili nsuku zonke.
I-TML: Ngicabanga kanjalo ezinye. Lapho ungumfundi wezandla, lapho ufundile izincwadi ezingenakubalwa zabalobi abahluke kakhulu, izitayela, iziza, amafomu, izichazamazwi, konke okuthonya, kuhlala ekuqondeni, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokubhala. Anginaye umbhali noma umsebenzi othile, kepha kuliqiniso lokho Ngiyazithanda izincwadi zekhulu le-XNUMX, ngakho-ke mhlawumbe ithonya livela lapho.
I-TML: Noma ngubani onokuthile okuthakazelisayo ukungitshela. Anginantshisekelo yokufunda nje ukufunda ngaphandle kokuthi kube nombono obucayi wesimo esithile, isikhathi noma izehlakalo ngemuva kwaso. Isibonelo, ngaphezu kokubhalwa kahle, inoveli yobugebengu noma yedrama, ngakho-ke ku-vogue manje, kufanele ungitshele ukubulala okungaphezu koyedwa noma ngaphezulu noma leyo ncazelo yobunye bobulili. Kufanele ube isizinda, ukugxeka noma ukwahlulela yamaqiniso nezinhlamvu ezihlobene, ngaphandle kwalokho ngilahlekelwa intshisekelo futhi angiziqedi.
I-TML: Ngisanda kuqeda incwadi enhle enesihloko esithi Infinity emhlangeni, ngu-Irene Vallejo. Kuyinto ukuhlolwa kuthiwani nge- ukusungulwa kwezincwadi ezweni lasendulo, kujabulisa ngempela ukuthi kubhalwe kanjani nokuthi kubaluleke ngani. Kube ukutholakala. Futhi ngisanda kuqala UMongo Mhlophe, of UCarlos Bardem, indaba enzima mayelana nobugqila ngekhulu le-XNUMX kanye nomnqobi wenoveli weSpartaco Prize for Historical Novels.
Ngokuqondene nokubhala, sengikutshelile lokho Ngiqede inoveli yalo nyaka ngoFebhuwari. Sizophuma singene Okthoba noma laphaya. Isihloko: Ukuhlelwa, Futhi akuyona umlando, noma mhlawumbe kunjalo?
I-TML: Kubi ... Bekulokhu kunjalo, kepha manje kungenxa yesimo samanje nobuchwepheshe obusha: i-Intanethi, amanethiwekhi, amapulatifomu ... Ngakolunye uhlangothi, abekho abafundi bezincwadi eziningi ezishicilelweFuthi kukhona okunye: noma yimuphi umsebenzi udinga ulwazi nolwazi, kepha kuvela ukuthi sifunda ukubhala ngeminyaka emihlanu. Ukuhlanganisa amagama ndawonye akusho ukwazi ukubhala incwadi, njengoba ukucula ngokuzwakalayo akusho ukuthi umuntu ungumculi we-opera. Kunemibandela emithathu yokuba ngumbhali: ufunde okuningi, uchithe isikhathi futhi, ikakhulukazi, unokuthile okufanele akutshele, okuthile okungekho lula njengoba kubonakala.
I-TML: Empeleni, akungibizi kakhulu. Sihlala edolobheni, sinengadi yemifino, akumele siphume, futhi isikhathi sethu siyadlula phakathi komculo nezincwadi. Yize kuliqiniso lokho ngiyenqena akucaci. Angikabhali umugqa kulezi zinyanga ezine, mhlawumbe ngoba inoveli yalo nyaka ibivele isiqediwe, ngakho-ke angijahile. Angicabangi ukuthi ngizogcina noma yisiphi salesi simo, ngaphandle kokukhohliswa nokulawulwa lapho izakhamuzi ezejwayelekile zitholwa ngaphansi kwazo, njengenjwayelo, siyakhokha futhi sizokhokha imiphumela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » UToti Martínez de Lezea: «Okuhlangenwe nakho nendlela yokubona impilo ayidluliseki»